Archive du 30-déc-2021
Volamena 49kg tratra tany Kaomoro Sidina avy ao Mahajanga no nitondra azy?
Nisy ny sidina manokana niainga tao Mahajanga an’ny Kaompania Mahoraise Ewa Air tamin’ny alalan’ny « Vol ZD 245 » niazo an’I Dzaoudzi (MJN-DZA) ny talata 28 desambra teo,
Ambohimiandra Andoharanofotsy Jiolahy 3 lavon'ny balan'ny zandary
Andian-jiolahy maromaro nirongo basy no niara-nanafika tetsy Ambohimiandra Fokontany Ambohimala kaominina Andoharanofotsy ny talata tokony ho tamin’ny 12ora alina.
Lesoka nomarihin’ny SEG Niaro tena sy nanazava ny Lehiben’ny BNGRC
Isan’ny nanaovan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Serge Gellé fanamarihana ny BNGRC (Biraom-pirenena momba ny fitantanana ny loza sy ny tandindonin-doza)
Minisitry ny jono Tsy nahomby ny tetika hanosehana azy hiala…
“Sarotra izany hametra-pialana amin’ny adidy sy andraikitra nankinin’olona taminao izany. Fifandresen-dahatra no natao. Isaorana ny Filoha sy ny Praiminisitra sy ny Praiminisitra hoe:
Antoko politika Natiora “Sokafy ny governemanta”
Miha mitotongana ny mahaolona, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Natiora, nanombana ny fahitany ny fiainam-pirenena teto Madagasikara tato anatin’ity taona 2021 ity.
FIMPIMA Nifanakalo traikefa ireo mpikambana
Nifanakalo traikefa tetsy amin’ny le Pave Antaninarenina omaly ireo mpikambana ao amin’ny FIkambanan’ny Mpikabary Malagasy na ny FIMPIMA.
Hanitra Andriamboavonjy « Zava-dehibe ny naha lasa vakoka iraisam-pirenena ny kabary »
Tamin’ny 15 Desambra lasa teo raha tsiahivina no nambara ho ren-tany ho ren-danitra fa nekena ho vaoka iraisam-pirenena ny Kabary Malagasy niarahana tamin’ny UNESCO sy ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina.
KAOMININA IVATO Nizara fanampiana ho an’olona 1100 isa
Olona miisa 1.100 no nozaraina fanampiana omaly tao amin’ny kaominina Ivato. Nahitana fotsimbary, kafe, siramamy ary sira izany niampy paty hahafahan’izy ireo miatrika ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao sambatra
Vato tsy ara-dalàna « Quartz » 780 kg sarona teny Carion
Nomena naoty 3,81/10 ny kaominina 698 Ary mba firy no mendrika ny Fanjakana foibe?
Kaominina 698 no nahavitan’ny minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana fanadihadiana momba ny fitantanana ifotony, tamin’ny alalan’ny Sampana fanaraha-maso ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana
Vadina pasitera nanala sofin’olona Naiditra am-ponja vonjimaika
Naiditra am-ponja vonjimaika omaly hariva ao Tsiroanomandidy ilay ramatoa vadina pasitera nanampatra herisetra tamina tovovavy iray, raha ny fampitam-baovao voaray.
Valaretina coronavirus “Mety afaka ity fety ity dia tratra ny PIC”
Tsy mitsahatra ny miova ny singa ao anatin’ny Coronavirus ary mamorona endrika na “variant” vaovao foana izany, hoy ny fanazavan’ny dokotera mpitsabo, Dr Fidy Bariniaina.
Ivoamba Lalangina Jiolahy 3 lavon’ny bala, 05 tratra
Jiolahy miisa 05 no voasambotra ka 01 no lavon’ny balan’ny Polisy miasa ao amin’ny Fitaleovam-paritry ny Filaminam-bahoaka (DRSP) Matsiatra Ambony ny 29 desambra lasa teo tany an-toerana rehefa namaky trano.
Edito Mirary fialantsasatra mamy
Inona intsony moa no azo ambara fa dia mbola miala sasatra, hono, aloha izany ny praiminisitra sy ny governemantany koa!? Amin’ny faha 5 janoary 2022 any ho any indray, hono, aloha miresaka.